China SHHAG Professional Frame kely Glass Door mpanamboatra-FD-02 Manufacturer and Factory |SHHAG
Sarom-baravarankely sliding vata fampangatsiahana ara-barotra
Varavarana fitaratra namboarina ho an'ny R...
Refrigera ara-barotra namboarina...
SHHAG Gravity mamerina fitaratra...
Varotra ambongadiny amin'ny cooler gl...
SHHAG Professional Frame kely Glass Door mpanamboatra-FD-02
Matihanina mpanamboatra varavarana fitaratra Frameless
SHHAG Professional Frameless Glass Door mpanamboatra, OEM & ODM order dia noraisina tsara, araka ny fangatahanao amin'ny loko, ny fomba, ny logo ary ny habeny.
1. Double / triple tempered vera misy entona argon
2. Nafanaina fitaratra sy ny rafitra teknolojia
3. Aluminum firaka mombamomba ny varavarana
4.Exclusive famolavolana rafitra hinge
5. Tazony misokatra ary mijanona ny varavarana
6.T8 LED jiro
Ny orinasanay dia orinasa feno manokana amin'ny fampandrosoana, famokarana ary fivarotana vokatra fitaovana rojo mangatsiaka.Ny vokatra lehibe dia ny varavarana fitaratra vata fampangatsiahana elektrika fanafanana, fanafanana elektrika varavarana fitaratra mampangotraka, fanafanana herinaratra aluminium firaka frame, nosy kabinetra amin'ny fitaratra, tokantrano fitaovana sy ny trano fanaka henjana vera (ambony 2.7mm fitaratra toughened), photovoltaic fitaratra.Ankoatr'izay, ny orinasanay dia manao ny tetikasa fanavaozana kabinetra taloha ho an'ny toeram-pivarotana lehibe, toy ny kabinetra nosy, kabinetra, vavahady, sns.
Manohy manome ny mpanjifanay ny rafitra ara-barotra manara-penitra indrindra eny an-tsena izahay, manolotra vokatra angovo ambany mba hampihenana ny fandaniana amin'ny asa ary hanampy amin'ny fiarovana ny harena voajanahary.Miaraka amin'ny fanoloran-tena tsy manam-paharoa amin'ny "Quality, Innovation, Customer Service, Continuous Improvement, ary Flexibility", ny orinasanay no mpamatsy safidy ho an'ny singa ara-barotra amin'ny indostrian'ny vata fampangatsiahana.
1. Te hividy ny vokatrao aho, ahoana no handoavana?
Afaka mandoa amin'ny alalan'ny T/T, L/C, WEST UNION, ESCROW, PAYPAL, ETC.Indrindra ESCROW, izay miantoka ny Alibaba.com.Azo antoka sy mahomby izy io.
1. Amin'ny ranomasina, ho an'ny FCL, LCL;
2. Mpanjifa milaza ny mpanentana entana na ny fomba fandefasana entana!
3. Inona ny habeny sy ny mari-pana amin'ny varavarana?
Ny vokatra dia namboarina, miankina amin'ny tetikasanao izany.Ny habe mahazatra anay koa dia 30'' x 75''.Ary ny mari-pana mahazatra dia 0 °C ~ 8 °C ho an'ny vata fampangatsiahana, -18 °C ~-22 °C ho an'ny vata fampangatsiahana.Ny maripana mifototra amin'ny fangatahanao.
1. Afaka mamokatra araka ny sary sy ny fepetra takiana.
2. Tsara aorian'ny varotra.
3.We dia orinasa mpanamboatra fitaovana fampangatsiahana ara-barotra, fahaiza-mamokatra tsara indrindra, fanaraha-maso kalitao tsara indrindra, serivisy tsara indrindra.
4.We dia orinasa mpanamboatra fitaovana fampangatsiahana ara-barotra, fahaiza-mamokatra tsara indrindra, fanaraha-maso kalitao tsara indrindra, serivisy tsara indrindra.
Momba ny SHHAG
Shandong Huajing Glass Co., Ltd.afaka manome vokatra sy vahaolana vaovao ho an'ny indostrian'ny varotra.Miaraka amin'ny 20000 metatra toradroa ny faritry ny orinasa sy ny mpiasa 150, SHHAG dia manana tsipika famokarana ho an'ny elektrika nafanaina varavarana fitaratra, vata fampangatsiahana Glass varavarana, Chiller fitaratra varavarana, mandeha-in mangatsiatsiaka fitaratra varavarana, divay kabinetra fitaratra varavarana, zava-pisotro mangatsiatsiaka fitaratra varavarana, Island vata fampangatsiahana Glass varavarana. , Varavarana fitaratra TLCD sy varavarana fitaratra vata fampangatsiahana ara-barotra hafa.Manaiky baiko OEM sy baiko namboarina ho an'ny vokatra mifandraika izahay.Ny vokatray dia nandalo CE, ROHS, SGS, SASO, CCC fanamarinana.Ny vokatra rehetra dia amboarina araka ny rafitra fanaraha-maso kalitao ISO9001-2008 izay miantoka ny kalitao sy ny fahombiazan'ny vokatra azo antoka.
teo aloha: SHHAG Gravity mamerina varavarana fitaratra-FD-04
Manaraka: Namboarina ara-barotra Refrigeration Display Doors mpanamboatra avy any Shina -CD-02
SHHAG Gravity mamerina varavarana fitaratra-FD-04